तीव्रगतिमा गाडी चलाउनुहुन्छ ? ट्राफिक प्रहरीले यसरी सबै थाहा पाउँछ – kalikadainik.com
बुधबार, आषाढ ०४, २०७६ | १७:५६:५४ |
काठमाडौं । बल्खुबाट एउटा फर्ड गाडी धोबिघाटतर्फ हुँइकिँदै आयो ।
गाडीको तीव्रगति हुनसक्ने देखेर ट्राफिक प्रहरीले ‘लेजर गन’ (गाडीको गति नाप्ने यन्त्र) तेस्र्याइहाले ।
गाडीको गति नाप्न प्रयोग गरिने लेजर गनमा विवरण सहितको फोटो तुरुन्तै प्रिन्ट भइहाल्यो ।
फोटोमा देखियो –
लोकेसन – धोबिघाट
समय – १६ः२५ः०४
स्पीड जोन – ४० किलोमिटर/घण्टा
भेहिकल स्पीड – ४८ किलोमिटर/घण्टा
दूरी – ६२ मिटर
ट्राफिक प्रहरीले अलिक परबाट इसारा गरेर गाडीलाई रोक्यो । ‘किन रोकेको सर ?’ गाडी चालकले प्रश्न तेस्र्याइहाले ।
ट्राफिक प्रहरीले सवारीको गति बढी भएको जानकारी दिए । गाडी चलाउनुपर्नेभन्दा ८ किलोमिटर प्रतिघण्टा बढी तीव्र गतिमा सवारी रहेको प्रहरीले जानकारी दियो ।
तर सवारीचालक ट्राफिक प्रहरीको कुरा मान्न तयार भएनन् । प्रहरीले ‘लेजर गन’बाट प्रिन्ट गरेको फोटो देखाउँदै भन्यो, ‘यो क्षेत्रमा तपाईंले ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा माथि तीव्र गतिमा सवारी चलाउन पाउनुहुन्न । तपाईंले अहिले ४८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले कार कुदाउनुभयो, यसले गर्दा दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुन्छ ।’
एकैछिन सम्झाएपछि ट्राफिक प्रहरीले उनलाई सवारी जरिवानाको दफा च (८) बमोजिम ५ सय रुपैयाँ जरिवानाको चिट काट्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले काठमाडौंमा बनेको कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डमा ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा सवारी चलाउनुपर्ने मापडण्ड बनाएको छ । ‘लेजर गन’ले सवारीको गति नाप्दा प्रमाणको रुपमा फोटो पनि आउने भएकाले सवारी चालकलाई सम्झाउन सजिलो हुने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीएसपी रामबाबु रानाले लोकान्तरलाई बताए ।
‘लेजर गनले गति नाप्दा फोटो पनि आउने भएकाले सवारी चालकले यसको बारेमा वादविवाद गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
के हो लेजर र राडर गन ?
ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको गति नाप्न भित्र्याएको सबैभन्दा पछिल्लो प्रविधि ‘लेजर गन’ र ‘राडर गन’ हो । यसले सवारीसाधनको गतिको मापन गर्दछ । यसमा कुन ठाउँमा नापिएको भन्नका लागि लोकेशन पनि हुन्छ ।
मिति र समय पनि सँगसँगै देखाउने ‘लेजर गन’मा त्यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने सवारी साधनको गति र मापदण्डभन्दा बढी भएमा सवारी गुडेको गतिको मापन ‘लेजर गन’ले गर्छ भने ‘राडर’ प्रिन्टबाहेक अरु सबै काम गर्ने डीएसपी रानाले बताए ।
‘यसले लोकेसन, समय, मिति र गति नापेर फोटोमा जस्ताको तस्तै उतार्ने भएकाले यो पारदर्शी पनि हुने हुँदा सबैलाई गल्ती गरेको महसुस पनि गराउन सजिलो भएको छ,’ डीएसपी रानाले भने ।
कुन–कुन ठाउँमा नाप्छ लेजरले ?
ट्राफिक प्रहरीसँग ३ वटा ‘लेजर गन’ छन् भने १५ वटा ‘राडन गन’ छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक—कोटेश्वर सडकखण्डमा एउटा, सातदोबाटो–नख्खु–सानेपा–बल्खु लगायतका क्षेत्रमा अर्को र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सञ्चालन गरेको बालाजु हुँदै सानो झर्‍याङ, ठूलो झर्‍याङ, स्वयम्भु र विशेष गरेर कलंकी क्षेत्रमा ‘लेजर गन’ प्रयोग गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वसन्तराज पन्तले लोकान्तरलाई बताए ।
‘अहिले ठूलो बाटोमा तीव्र गतिको कारणले गर्दा दुर्घटना बढी भएको देखिन्छ । खुल्ला सडक देख्नासाथ स्वतः आफ्नो सवारीको गति बढाइहाल्ने र यसले गर्दा दुर्घटना निम्त्याउने गरेको देखिन्छ । यसलाई थोरै भएपनि लेजर गनले नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ एसएसपी पन्त भने ।
लेजर र राडर गनको प्रयोगमा ल्याएपछि दुर्घटना कम भएका उनले बताए । दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण तीव्रगति पनि रहेको बताउँदै उनले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो प्रविधिले ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गरेको बताए ।
लेजर गन मार्फत कति परे कारवाहीमा ?
लेजर र राडर गन जेठ २८ गतेबाट ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । गन सञ्चालनमा आएदेखि सोमवारसम्म बालाजु, कलंकी, कोटेश्वर र भक्तपुर सडक खण्डमा ५ सय ५३ वटा सवारीसाधन कारवाहीमा परेका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।